कोरोनाको जोखिम बढे पनि सीमा नाकामा कडाइ छैन – E Kutumba
By ईकुटुम्ब	 Last updated Mar 23, 2021 0
चैत १०, २०७७ मंगलबार ,केही हप्तादेखि भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि त्रास बढेको छ । भारतमा उच्च बिन्दुमा पुगेर नियन्त्रण उन्मुख पुगिसकेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दर एक्कासी बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि यसको डर बढेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सातै प्रदेशलाई पत्र लेखेर उच्च सतर्कता अपनाउन र भारतबाट आउनेहरुको परीक्षण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । सरकारले सीमानाकामा निगरानी गर्न निर्देशन दिए पनि धेरैजसो नाकाहरुमा निगरानीको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । केही नाकाहरुमा बल्ल सुरु गर्ने तयारी छ । केही सीमानाकालाई व्यवस्थित बनाउने भन्नेबारे अझै अन्योल नै छ । नेपाल र भारतबीचको सीमानाकामा अब त कोरोना सकिसक्यो र कहिल्यै पनि आउँदैन भनेझैँ मानिसहरु निर्बाध रुपमा आउनेजाने गरिरहेका छन् । मोरङको जोगबनी नाकामा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि खालका सुरक्षाका उपायहरु अवलम्बन गर्न थालिएको छैन । यो नाकाबाट पनि दैनिक रुपमा सामान्य अवस्थामा जस्तै मानिसहरु आवतजावत गरिरहेका छन् ।
भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र गतिमा बढ्दै गएको र नेपालमा समेत जोखिम हुँदासम्म यो नाकाबाट भारत जाने र आउनेको डाटा राख्ने कामसमेत सुरु भएको छैन । सामान्य ज्वरो नाप्ने काम वा हेल्थडेस्क पनि स्थापना गरिएको छैन । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले स्वास्थ्य टोलीसहितको बैठक बसिसकेको र अब भने निगरानी बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामी बैठक बसिसकेका छौँ । अब छिट्टै निगरानी बढाइन्छ’ भारतबाट जोगबनी नाका हुँदै नेपाल छिर्नेलाई एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि परिपत्र गरिसकेकाले अब छिट्टै निगरानीका सबै प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ उहाँले भन्नुभयो । पछिल्लो समय मोरङमा १० जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भेटिएका छन् । कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएकाहरुमा नयाँ भाइरस हो वा पुरानै हो ? भनेर ट्राभल हिस्टी हेर्ने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै उनीहरुको कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्ने तयारी पनि भइरहेको निरौलाले बताउनुभयो । थप प्रभावकारी र व्यवस्थित कसरी बढाउने भन्ने विषयमा भने फेरि बैठक बसेर छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । जोगवनी नाकामा पहिलेदेखि नै हेल्थ डेस्क भएकाले त्यसैलाई थप प्रभावकारी बनाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कैलालीमा रहेको नेपाल भारतका सीमानाका गौरीफन्टा पनि धेरै मानिसको आवतजावत हुने महत्त्वपूर्ण नाका हो । तर यो नाकामा पनि अहिलेसम्म कुनै कडाइ गरिएको छैन । भीडभाड उस्तै छ । भारत जाने र आउनेको लर्को पनि उस्तै छ । नाकामा पुगेर आउनुभएका स्थानीय नारायणी जोशी नेपाल प्रवेश गर्नेको डाटा लिने कामसमेत यो नाकामा सुरु नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘अहिले त डाटा लिने कामसमेत बन्द भएको रहेछ । ज्वरो नापेको पनि देखिएन ।’ उहाँले थप्नुभयो ‘कतिपय मानिसहरु त मास्कसमेत नलगाइ हिँडेका छन् । मास्क नलगाउनेलाई मास्क लगाउनसमेत कसैले आग्रह गरेको छैन ।’ यस्तै कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा भने सामान्य निगरानीको काम सुरु भएको छ । बिहान साढे ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेकाहरुलाई नाकामा ज्वरो नाप्न सुरु गरिएको छ । यस्तै एन्टिजेन प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण पनि थालिएको छ । छिटो रिपोर्ट आउने भएकाले कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्न पनि सहज हुने भएकाले परीक्षण थालिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । डाटा इन्ट्री गर्ने काम पनि सुरु भएको छ । दाङको कोइलाबास नाकामा अहिलेसम्म कुनैपनि सतर्कता अपनाइएको छैन । यो नाकामा पनि सामान्य ज्वरो नाप्ने, हल्थ डेस्क राख्नेलगायतका कामसमेत सुरु भएको छैन । सरकारले निर्देशन दिएकाले अब भने निगरानी बढाउने काम सुरु गर्ने दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेपछि दाङमा विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । तर यो नाका लगभग ठप्प जस्तै रहेको पौडेलले बताउनुभयो । यो नाकाको नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय भए पनि भारततर्फ नभएकाले सामान ल्याउन पाइँदैन । अहिले यो नाका लगभग ठप्पजस्तै रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यही भएर भारतबाट दाङ आउने धेरैजसो मानिसहरु नेपालगञ्जको कृष्णनगर नाका भएर आउँछन् ।
तैपनि कोही शङ्कास्पद बिरामीहरु भेटिएमा भने निगरानी बढाउने, ज्वरो नाप्ने, हेल्थ डेस्क राख्ने, क्वरेण्टीन बनाउने, आइसोलेशन बनाउनेलगायतका तयारी अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ छ । सङ्क्रमितहरु बढ्न थालेमा सुरुमा नेपालमा सङ्क्रमण बढेको बेला जस्तो खालको निगरानी र सर्तकता अपनाइएको थियो, त्यस्तै खालको सतर्कता अपनाइन्छ । यस्तै दार्चुलासँग सीमा जोडिएको धार्चुला नाका र बैतडीसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाकामा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि कडाइ गरिएको छैन । व्यवस्थित पनि बनाइएको छैन । यी नाकाहरुमा पनि विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर मात्र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउनेलगायतका काम गर्ने दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिद्वराज जोशीले बताउनुभयो । अबको एक महिनामा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै सचेत रहन इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले अनुरोध गरिसकेको छ । त्यही भएर नाकाहरुमा कडाइ गर्न भनिसकेको छ । तर नाकाहरुमा भने सरकारले भनेअनुसारको कुनै पनि तयारी भएको छैन । कोरोना भित्रने जोखिम नाकाहरुबाट धेरै हुने भएकाले यी ठाउँमा बढी सतर्कता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले यसभन्दा अगाडि नै भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरिएको छ । सभा, जुलुस, गोष्ठीलगायतका भीडभाड हुने कार्यक्रम नगर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो । केही दिनयता छिमेकी भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको र सर्तकता अपनाउन आवश्यक रहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।सरकारले भने जोखिम बढेपछि भारतसँग सीमा जोडिएका नाकामा निगरानी गर्न थालेको जनाएको छ । सम्भावित जोखिमयुक्त ठाउँहरुमा सरकारले एन्टिजेन परीक्षणका लागि आवश्यक किटसमेत पठाउन थालेको महाशाखाका इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभएको छ । भारतबाट फर्किएका नेपालीलाई १४ दिन घरभित्रै क्वरेण्टीनमा बस्न पनि सरकारले आग्रह छ । कोरोनाको जोखिम फेरि बढेकाले भीडभाड कम गर्न, अनिवार्य मास्क लगाउन, बेलाबेला साबुनपानीले हात धुन र भौतिक दूरी कायम गर्न विज्ञले सुझाव दिएका छन् ।
दुर्घटनामा घाइते भएका सहचालकलाई चालकले कालीगण्डकीमा बगाइदिए